Ecodesign: waxa uu yahay, sifooyinka iyo faa'iidooyinka | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 28/04/2022 12:00 | Deegaanka
Sanadihii ugu dambeeyay, kororka wacyiga hay'adaha iyo bulshada ee deegaanka ayaa horseeday soo ifbaxa ecodesign. Dib-u-warshadaynta qashinka waxay heshay caan ka badan warbaahinta, tusaale ahaan iyada oo kor loo qaaday gadashada iyo iibinta agabka gacan labaadka ah. Si kastaba ha ahaatee, tani waa cabbir aad u sarreeya oo looga golleeyahay in lagu dhimo kheyraadka aan isticmaalno iyo qashinka aan soo saarno. Taas awgeed, waxaa lagama maarmaan ah in la farageliyo nidaamyada maamulka si loo keeno ecodesign dhammaan deegaanka la dhisay.
Sababtan awgeed, waxaan dooneynaa inaan u hibeyno maqaalkan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ecodesign, sifooyinka iyo muhiimada.
1 Waa maxay ecodesign
2 Astaamaha ecodesign
4 Wax soo saar iyo naqshad waara
5 faa'iidooyinka deegaanka
Waa maxay ecodesign
Ecodesign waa weji habka horumarinta alaabta kaas oo ujeedadiisu tahay in la yareeyo saamaynta deegaanka ee alaabta. Waxaa la odhan karaa in la gaaro joogteynta dhaqaalaha ayaa fure u ah nidaamka maamulka, sababtoo ah abuurista iyo dib-u-habeynta alaabooyinka ixtiraamaya deegaanka, waxaa suurtagal ah in la joojiyo xaalufka nidaamka deegaanka, xaalufka kheyraadka dabiiciga ah iyo saameynta dammaanadda ah ee sida xun u saameeya nidaamka deegaanka iyo caafimaadka aadanaha. Mabaadi'da ecodesign waa:
Wax ku oolnimada wax soo saarka alaabta, taas oo ah, isticmaalka qadarka ugu yar ee alaabta iyo tamarta ee suurtogalka ah.
Loogu talagalay in la kala diro, taas oo u oggolaanaysa dib-u-warshadaynta mustaqbalka ee alaabta, mid kasta oo ka mid ah qaybaheeda ayaa si fudud loo aqoonsan karaa oo loo kala saari karaa si sax ah iyada oo loo eegayo dabeecadda iyo ka kooban.
Soo saar alaab adoo isticmaalaya hal ama in ka badan oo ah walxo "bio". si loo fududeeyo habka dib u warshadaynta.
Isticmaal qaabab iyo agab waara.
Wax-ka-beddelashada iyo suurtogalnimada dib-u-isticmaalka iyo dib-u-warshadaynta alaabta.
Yaree cabbirka alaabta si loo yareeyo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo (GHG) inta lagu jiro gaadiidka. Natiijo ahaan, badeecooyin badan ayaa la rari karaa safar kasta, iyadoo la wanaajinayo booska iyo isticmaalka shidaalka.
Ula dhaqmidda badeecadaha sidii adeegyo oo aan ahayn shay keliya, si loo xaddido isticmaalkooda baahiyaha oo aan loo eegin rabitaanka lahaanshaha, hadda waxay calaamad u tahay suuqa caadiga ah.
Taageer tignoolajiyada cusub si loo horumariyo waxtarka alaabta.
Faafi oo isku xidh fariinta waarta ee alaabta qaabaynteeda.
Gabagabadii, Ujeedada ecodesign waa in la yareeyo saameynta deegaanka ee alaabta aan isticmaalno inta ay nool yihiin waxtarka leh oo dammaanad qaadaya wanaagga iyo tayada nolosha isticmaaleyaasha. Qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee ecodesign waa:
Ku habboon ku-dhaqanka dhaqaalaha wareegtada.
Waxaad dhimi kartaa kharashyada habaynta iyo rarida alaabta.
Waxay hagaajinaysaa habka wax soo saarka iyo sidaas darteed tayada alaabta la helay.
Waxay gacan ka geysataa dabeecadda cusub ee shirkadda.
Waxay soo jeedinaysaa afar heer oo u oggolaanaya ku-shaqeynta hagaajinta, dib-u-qaabaynta, abuurista iyo qeexidda badeecadaha cusub iyo hababka wax-soo-saarka cusub.
Iska ilaali inaad khasaarto kheyraadka.
Marka nolosha waxtarka leh ee badeecadu ay dhacdo, tixgeli in badeecada dib loo warshadeeyay oo dib loo isticmaalo, taasoo qiimo u leh qashinka.
Waxaa jira xeelado kala duwan oo habayneed sida: LiDS wheel iyo PILOT strategy.
Tusaalooyinka ecodesign ee hoos lagu muujiyey, qaar waa qayb ka mid ah nolol maalmeedkeena, halka qaar kalena ay muujinayaan horumarada weli ku jira dhallaankooda:
Naqshadeeyaha qaboojiyaha, qaboojiyaha iyo qalabyada kale sida kuleyliyaha, makiinada dharka dhaqda iyo makiinada weel dhaqida, kuwaas oo ay nidaamiyaan Guddiga Yurub (EC).
Naqshadaynta iyo dhismaha dhismayaasha deegaanka.
Mashiinnada qaxwaha Talyaaniga sababtoo ah ma isticmaalaan filtarrada waraaqaha.
Alaabta guriga waxaa lagu sameeyay qalab leh shaabad FSC (Gudiga Maamulka Kaynta) iyo agab dib loo warshadeeyay.
Alaabta guriga ayaa la iibiyay iyada oo aan la isku dhejin, hoos u dhigaysa cabbirka alaabta iyo wanaajinta rarida.
Naqshadeynta alaabta guriga laga saari karo sida kuraasta magaalada.
Isticmaal qashinka dunta, bacaha si aad u samayso dhar.
Wax soo saar iyo naqshad waara
Dunidan ku socota 8 bilyan oo qof, qaabkii hore ee dhaqaalaha tooska ah waa mid duugoobay oo inoo horseedaya mustaqbal aan la hubin. Ecodesign wuxuu ku dhex dhashay qaabkan, alaabada waara waxay ku daraan shuruudaha deegaanka heerarkooda oo dhan: fikradda, horumarinta, gaadiidka iyo dib u warshadaynta.
Waa inaan soo saarno si ka wanaagsan oo waxtar leh, sababo muuqda dartood: alaabta ceeriin iyo kheyraadka dabiiciga ah maaha kuwo aan dhammaad lahayn, haddii aan la daryeelinna way dhammaan karaan. Qaar ka mid ah, sida biyaha, ayaa muhiim u ah nolosha, halka qaybaha muhiimka ah ee dhaqaaluhu ay ku tiirsan yihiin macdanta, sida warshadaha tignoolajiyada. Haddii aan ku darno qiiqa kaarboon dioxide iyo isticmaalka tamarta ee xarumaha wax soo saarka, meeraha ma bixin doono biilasha.
Cawaaqibta ka dhalan karta macaamiishu -sida laga soo xigtay Greenpeace, Waxaan isticmaalnaa 50% kheyraadka dabiiciga ah maanta in ka badan 30 sano ka hor - oo ay hogaaminayeen Qaramada Midoobay (QM) si ay u dalbato hab cusub oo wax soo saar si kor loogu qaado kheyraadka iyo tamarta, loo horumariyo tamar la cusboonaysiin karo, la joogteeyo kaabayaasha, wanaajiso helitaanka adeegyada aasaasiga ah loona abuuro shaqooyin deegaan iyo tayo leh.
Faa'iidooyinka deegaanka ee wax soo saarka joogtada ah ayaa sidoo kale faa'iido u leh warshadaha iyo muwaadiniinta. Qaramada Midoobay waxay ku doodaysaa in nidaamkani u wanaagsan yahay qof kasta sababtoo ah wuxuu wanaajiyaa tayada nolosha malaayiin, wuxuu yareeyaa faqriga, wuxuu kordhiyaa tartanka wuxuuna yareeyaa kharashka dhaqaalaha, deegaanka iyo bulshada.
Faa'iidooyinka ecodesign marka la eego fikradaha badeecada iyo adeegga way badan yihiin waxayna caawiyaan yaraynta dhinacyada kala duwan ee deegaanka ee alaabta dhaqameedsida maareynta qashinka.
Nasiib darro, waxa kale oo jira faa’iido darrooyin ka hor istaaga in habkan loo qaato halbeegga wax-soo-saarka wax-soo-saarka iyo adeegyada, sida aqoonta uu macmiilku u leeyahay badeecadahaas oo aad u yar, qiimaha badeecaddu waxa uu ka sarreeyaa kan alaab-dhaqameedka. marar badan , raadinta agabka beddelka naqshadaynta iyo soo bandhiga alaabtan qaybaha suuqa oo aad u tartan badan, sida guryaha balaastikada ah.
Marka, sida gunaanadka, waxaan arki karnaa in kasta oo faa'iidooyinka aadka u soo jiidashada leh ee ecodesign labadaba soo saarayaasha iyo Macaamiisha, cilladaheeda ayaa weli caqabad ku ah caannimada suuqa maanta iyo, sidaas darteed,, hor istaagaan isticmaalka in our korsashada ee caadooyinka isticmaalka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la sii wado u aragta inay tahay beddel muhiim ah oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka waaweyn ee deegaanka ee nagu haya, oo ay weheliso hindise sharciyeed, isticmaalka mas'uuliyadda leh iyo qaadashada wacyigelinta deegaanka ee dhammaystiran ee bulshada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto ecodesign iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Ecodesign